University Canada West (UCW)မှာ မြန်မာကျောင်းသား/သူတွေအတွက် ပညာသင်ယူဖို့ အခွင့်အရေး - Crown Education
May 18, 2020 Crown Online Education Fair 2020
✅ Canada မှာကျောင်းသွားတက်ချင်တယ်!
✅ စီးပွားရေးဘာသာရပ်ကို လေ့လာချင်တာ!
✅ Scholarship လေးလည်း လိုချင်တယ်!
✅ ကျောင်းပြီးရင် အဲ့နိုင်ငံမှာပဲ အလုပ်ဆက်လုပ်ချင်တာ!
✅ IELTS/ TOEFLတွေလည်း ဖြေထားတာမရှိသေးဘူး!
✅ လက်ရှိ Canada နိုင်ငံရဲ့ Covid-19 အခြေအနေလည်း သိချင်တယ်! ကျောင်းလျှောက်ချင်ပေမဲ့ ဘာမှန်းမသိတော့ ငြိမ်နေရတယ်!
❒ သင်သာဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေသူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ CROWN Educationက ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမယ့် CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020ကို အိမ်မှာနေရင်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။
❒ CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020မှာဆိုရင် ယူအက်စ်၊ယူကေ၊ကနေဒါ၊သြစတြေးလျ၊ဆွစ်ဇာလန်၊စင်္ကာပူ၊ထိုင်းနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်တွေပါဝင်ပြီး ဆွေးနွေးဟောပြောသွားမှာဖြစ်ပြီး ကနေဒါနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးဘွဲ့သင်ယူလိုသူတွေလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် University Canada West (UCW)တက္ကသိုလ်လည်း ပါဝင်သွားမှာပါ။
❒ UCWဟာဆိုရင် British Columbia ပြည်နယ်အတွင်းရှိ သွားလာရေးလွယ်ကူအချက်အချာကျတဲ့ Vancouverမြို့လယ်မှာ တည်ရှိတဲ့ Private Universityတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Vancouver မြို့ ဆိုတာ
ကမ္ဘာ့နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းကောင်းမွန်တဲ့မြို့ (၅)မြို့ထဲပါဝင်ပြီး ခရီးသွားတွေကိုအံ့ဩမှင်သက်စေတဲ့နေရာတွေအပြည့်ရှိတဲ့ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးအရ နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းတွေ တည်ရှိရာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့အပြင် ရာသီဥတုကလည်း တခြား ပြည်နယ်တွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် နေချင်စရာကောင်းလောက်အောင် သင့်တင့်မျှတမှုရှိပါတယ်။
❒ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်အများစုတည်ရှိရာဒီလိုမြို့ကြီးမှာ စီးပွားရေးဘာသာရပ်တွေ လေ့လာသင်ယူချင်တယ် ၊ EQA, ACBSP, BCCAT, EduCanadaစတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြု ခြင်းခံထားရတဲ့တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ University Canada West က သင့်အတွက် သင့်တော်တဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါတင်မကသေးဘဲ UCW က Vancouver မြို့ရဲ့ အချက်အချာကျတဲ့နေရာမှာ ဖွင့်လှစ်ပေးထားတာဆိုတော့ ကျောင်းသား/သူတွေရဲ့ နေထိုင်သွားလာရေး ၊ လုံခြုံမှုရှိရေးတွေအတွက်လည်း စိတ်ပူစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့။
❒ UCWမှာ စီးပွားရေးဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ Bachelor Degree ၊ MBA Degree တွေ ပို့ချသင်ကြားပေးတဲ့အပြင် ကနေဒါမှာကျောင်း(၂)နှစ်တက်ပြီးနောက် အလုပ်ဆက်လုပ်ခွင့်ရချင်သူတွေအတွက် Associate Program တွေလည်း သင်ကြားလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ACCA တက်ရောက်အောင်မြင်ထားသူတွေအနေနဲ့လည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘာသာရပ်အရေအတွက်ပြီးမြောက်အောင်မြင်ထားရင် တခြားဘွဲ့တွေရှိထားဖို့မလိုပဲ အဆိုပါကျောင်းရဲ့ MBA Degree programကို တိုက်ရိုက်တက်ရောက်နိုင်ခွင့်တွေရှိပါတယ်။
❒ UCW မှာသင်ကြားနေတဲ့ program အားလုံးက business-oriented and teaching-intensive learning တွေ ၊ theoretical and practical learning method တွေနဲ့သင်ယူစေတာဆိုတော့ ကျောင်းပြီးရင် စာတွေ့ပဲ သိလိုက်တာမျိုးမဖြစ်စေတာကလည်း နိုင်ငံတကာကျောင်းသား/သူတွေအတွက် အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးကျောင်းလျှောက်တဲ့အခါလိုအပ်လေ့ရှိတဲ့ IELTS/ TOEFLရမှတ်မရှိထားသူတွေကိုလည်း တခြား English Test တွေနဲ့ လက်ခံပေးနေပြီဆိုတော့ အဆင်ပြေပြီပေါ့။
❒ UCWမှာ စာသင်စရိတ်အနေနဲ့ တစ်နှစ်ကို ပျမ်းမျှ CAD 17,500 ဝန်းကျင်ခန့်သာ ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေရဲ့ ပညာအရည်အချင်းအလိုက် CAD 8000မှ CAD 20000 အထိ လျှောက်ထားနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကျောင်းတက်နေရင်း တရားဝင် Part-timeအလုပ်လုပ်ခွင့်ကိုပါ ခွင့်ပြုပေးထားသလို ဘွဲ့ရပြီးတဲ့ကျောင်းသား/သူတွေအနေနဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံမှာပဲ အများဆုံး (၃)နှစ်ဝန်းကျင် အလုပ်ဆက်လုပ်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။
❒ ဒီတော့ University Canada West (UCW)မှာ မြန်မာကျောင်းသား/သူတွေအတွက် ပညာသင်ယူဖို့ ဘယ်လိုအခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်၊ ပညာရေးအရ ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် “CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020”မှာ University Canada West (UCW)တက္ကသိုလ်ရဲ့ တာဝန်ခံနဲ့ တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ CROWN Educationက စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
ယူအက်စ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးResearch & Public တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Colorado State Universityမှာ USD 40,000ပညာသင်ဆုနဲ့ သင်ကြားခွင့်ရယူပါ